हाम्रो बारेमा - सुजो MENTIONBORN उद्योग र व्यापार कं, लिमिटेड
सूज़ौ MENTIONBORN उद्योग र व्यापार कं, लिमिटेड
सूज़ौ MENTIONBORN उद्योग र व्यापार कं, लिमिटेड No.18 मा स्थित, पूर्वी Chenghu रोड, Wuzhong जिल्ला, सूज़ौ, चीन। हामी स्पोर्ट्सवेयर / एक्टिवेयर / प्रदर्शन पोशाक र क्याजुअल पहिरनमा विशेषज्ञता पाउँछौं। हाम्रो लाइनहरु होमटेक्स्टाइल कभर गर्दछ। हामी ग्राहकमुखी छौं र अन्त प्रयोगकर्ताहरूका लागि थप मूल्यहरू सिर्जना गर्न जारी राख्छौं। विगतका दशकहरूमा हाम्रा मुख्य उत्पादनहरू स्थिर रूपमा युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा निर्यात भइरहेको छ भने घरेलु बजारमा हाम्रो बिक्री पनि हालका वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
सुजो MENTIONBORN मा अनुसन्धान र विकास, उत्पादन, यातायात र ब्रान्डि etc इत्यादि सामिल छन्, जुन टोली पेशेवर, दक्ष, प्रतिष्ठित र विश्वासनीयको साथ सञ्चालित छन्। हामी डिजाइन सीमा तोड्दै राम्रो छौं, अवधारणाको विपक्ष र मिथक हो कि घरका कपडा र खेलकुद फेसनसँग केहि गर्दैनन्। व्यावसायिक डिजाइनका साथ हामी घरका टेक्सटाइल र खेलका पोसाकहरूप्रति व्यक्तिको गहिरो प्रेम र चाहना जगाउन प्रतिबद्ध छौं। आराम र शैलीको उत्तम संयोजनको लागि प्रतिबद्ध गर्नुहोस् र व्यक्ति जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस्। हालका वर्षहरूमा, वातावरणीय रिसाइकल उत्पादहरू हाम्रो मुख्य विकास उत्पादनहरू पनि हुन्। नवीनता सधैं हाम्रो विश्वास हो। हाम्रो आर एण्ड डी विभाग सुझहूमा अवस्थित छ, शंघाईको एकदम नजीक छ, र बजार सीमाहरूबाट फिडब्याकहरू अवशोषित गर्दछ, अन्त-प्रयोगकर्ताहरूको अनुभवलाई बढाउँदै र हाम्रा ग्राहकहरूलाई सबैभन्दा कम लागत प्रभावी उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ।
वास्तवमा, सुजो MENTIONBORN का अभिनव उत्पादनहरू नागरिकको जीतमा परिणत हुन्छन्। किनभने हाम्रा सबै आविष्कारहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई राम्रोसँग फिट गर्न अद्वितीय रूपमा डिजाइन गरिएको हो, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, सँधै किफायती रहनुहोस्।
एकचोटि तपाईंले सही उत्पादनहरू पाउनुभयो भने, यो तपाईंको खुशीको वास्तविक स्रोत बन्नेछ!
हाम्रो नारा: खुशीका लागि मेन्टेन-जन्म!
अग्रगामी र नवीन
भाव लायक को
हामी स्वास्थ्य, सान्त्वना र सौन्दर्यको मूल अवधारणामा ध्यान केन्द्रित गर्न जारी राख्नेछौं,
उपभोक्ता आवश्यकताहरू पूरा गर्न जारी राख्नुहोस्, उद्योगको विकासको अग्रणी।
नमूना प्रशोधन र उत्पादन, पुरुषको द्रुत-सुकाउने बुने शर्ट्स, क्विक-ड्राई Sports स्पोर्ट्स शर्टहरू, दुई-पक्षीय फ्लानेल कम्बल, खेल ज्याकेट, पुरुषको अनौपचारिक खेल प्यान्टहरू,